‘रियल लाइफ’मा होइन, ‘रिल लाइफ’मा रुँदा भविष्य अलि चल्थाे कि शर्मा जी !
टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटका सञ्चालक प्रकाश सुवेदी र नायिका पुजा शर्माबीचको विवाद चुलिँदो अवस्थामा छ।
सुवेदीले रजतपट कार्यक्रममा नेपालमा कति जिल्ला छन् र कति प्रदेश छन् भनेर अन्तर्वार्ता लिएपछि उनीहरुको विवाद सुरु भएको थियो। शर्माले नेपालमा १४ जिल्ला र ७२ प्रदेश भएको बताएपछि सुवेदीले उत्तर नमिलाएको भन्दै कार्यक्रममा नै तालि बजाएर धन्यवाद दिएका थिए।
त्यसपछि त्यो ‘क्लिप’ काटिदिन आग्रह गरेपनि सुवेदीले नकाटि हालिदिँदा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। नहालुन पनि किन? देशकै गहना मानिने कलाकारले यतिका सानो ज्ञान नराख्नु भनेको देशमाथिकै बेइज्जती बाहेक केही होइन्। सो पश्चात शर्मा र सुवेदीको विवाद हुँदै आएको थियो। एकथरि सिनेकर्मी शर्मा र एकथरि सुवेदीको पक्षमा बोल्दै आएका छन्।
शर्माका ‘फ्यान’हरुले सुवेदीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत दिन भ्याए भने कहलिएका कलाकार दीपकराज गिरीले त टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिन नजान ‘ह्विप’ नै जारी गरे।
यसपछि रुष्ट बनेका सुवेदीले शर्मालाई लक्षित गर्दै ‘दारा भएकी तथा महानायिका’ शब्द प्रयोग गरे। भने शर्मा पनि के कम उनको प्रतिवादमा उत्रिहालिन। यसपछि अरुलाई के चाहियो र? शर्मा र सुवेदीको बिचमा लागेको आगोमा घिउ थप्न सबै लागिपरे।
केही समयमा नै सुवेदीले बोलेको उक्त शब्द प्रयोगको चौतफी विरोध भयो। यसले शर्मालाई आड मिलेर हुनुपर्छ आइतबार चलचित्रकलाकार संघ, बिकाश बोर्ड लगायत बिभिन्न संघसंस्थामा उनीबिरुद्ध उजुरी दर्ता पनि गराइन् र सुवेदीले सोही साँझ टेलिभिजनमार्फत माफी मागे।
उनले टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत आफूले बोल्नु नहुने कुरा बोलेको भन्दै चलचित्र क्षेत्र आफ्नो परिवार भएको र यसलाई सधैँ माया गर्ने बताए। ‘ ‘दारा’ भन्ने शब्द मैले बोल्न नहुने थियो। जुन मेरो मुखबाट फुस्कियो। अब आइन्दा यस्तो नहुँदै,’ उनले भने।
सुवेदीले थपे ‘यस बिषयको माफी एक पटक, सय पटक, हजार पटकभन्दा पनि चित्त बुझ्दैन भने लाख पटक माग्छु।’ सुवेदीले आफूबाट गल्ती भएको र यस विषयमा आफु चुकेको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
माफी मागेसँगै सिनेजगतमा यो कुरा हराउँदै लाग्दा कुनै बेलाका शर्माका प्रेमी मानिने सुदर्शन थापाले भने आफूले माफी मागेको नदेखेको बताएका छन्। एक युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा शर्माकै अगाडी उनले सुवेदीलाई कानुनी कठघरमा ल्याएर छाड्ने बताएका छन्। तर एक पक्षका दर्शकले उनलाई बिगतमा शर्माले पुरुषमाथि लक्षित गरेर बोलेको शव्द पनि पुनविचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
उसो त उनले नायक प्रदिप खड्कालाई लक्षित गर्दै ‘प्रेम गीत– २’ मा आफूलाई नराखेर पनि मिडियामा ‘पूजा शर्मालाई किन नराखेको?’ भनेर आउने प्रश्नकै कारण फिल्म हिट भएको भनेर बिल्ला हानेकी थिइन्। उनले प्रदिप मात्रै होइन राजेश हमाल, आनमोल केसी, पल शाहलगायत सिनेर्मीलाई बेलाबेलामा चस्का दिँदै आएकी छिन्।
हुन त शर्मा पूर्व सञ्चारकर्मी पनि हुन्। उनलाई राम्रो काम गर्दा ताली र नराम्रो काम गर्दा गालि आउछ भन्नेर जानेकी नै होलिन्। तर ‘रिल लाइफ’मा जस्तै ‘रियल लाइफ’मा पनि रोएरै जित्न खोज्दै छिन्। आफूले गल्ति गर्दा चाहीँ ‘सरी’ले काम चलाउने शर्मा अरुले गल्ति गर्दा चाहीँ तिललाई पहाड बनाउँदै छिन्।
उनलाई पनि थाहा होला सञ्चारमाध्यमसँग जोरी खोज्ने बानिले धेरै समय टिक्न सकिन्न। आज उनी जुन ठाउँमा छिन् सबै सञ्चारमाध्यमै कमाल हो। त्यसमा पनि टेलिभिजनकाे।
अभिनय शून्य भएको नायिकाको रातारात फिल्म ‘सुपरडुपर हिट’ भयो भनेर हलमा थेग्दिने नै सुवेदी हुन्। नत्र आशु नै झारेको शर्माको फिल्म युट्युवेको भरमा पक्कै चल्ने थिएन। त्यसैले ‘रियल लाइफ’मा होइन ‘रिल लाइफ’मा रुँदा भविष्य अलि चल्ला कि शर्मा जी !
प्रकाशित मिति: : 2020-08-11 10:14:31